PressReader - Ilanga: 2017-09-14 - UKUVELA NOKUSITHELA KWENYANGA K
UKUVELA NOKUSITHELA KWENYANGA K
Ilanga - 2017-09-14 - Imib -
SELOKHU saqala ukuxoxa, silokhu sigcizelela ukuthi uhlelo lwechabuthi lugqugquzela ukusebenzisana nemvelo kube kulandelwa izindlela zokhokho kodwa sibe singaluzibile ucwaningo olusha olusikhanyisela ngokuningi esingakakuqondi.
Kukhona eminye imikhakha yabalimi abakholelwa kuzo lezi zinhlelo kodwa beqinisekisa ukulalela izimo zempilo ezincike ekushintsheni kwezikhathi ezilethwa yilanga nenyanga emhlabeni. Kunenkolelo ethi ukuvela nokusithela kwenyanga esibhakabhakeni kunika izinguquko olwandle nasemhlabathini. Ukuvela nokusithela kwenyanga emhlabeni kunika izimo ezahlukene eziqondene nezolimo, okuhambisana nobungako bomsoco osemhlabathini ukunakekela nokondla izitshalo.
Ukuze kukhuthazeke ukusimama kwezitshalo, kumele abalimi baqaphe ukuthi ngesikhathi sokuqala kwenyanga entsha izitshalo ezilungele ukungena emhlabathini ngezivunwa ngaphezulu njengesipinashi nokusanhlamvu. Ngesigaba esilandelayo lapho unyezi usuqala ukuba namandla, kungatshalwa ezinembewu eqhamuka ngaphakathi kwezithelo njengotamatisi namathanga. Kuyothi ngesikhathi inyanga isigcwele - isinonyezi okhanya kakhulu - kube khona isimo esibizwa ngokuphefumula komhlaba okukhomba isimo sokumunceka komswakama ekujuleni komhlaba. Kuye kuthiwe yisona lesi sikhathi okuthiwa abalimi mabanakekele ukondla nokunonophaliswa kwezitshalo ezisemhlabathini, nokuba ziniselwe uma zidinga umswakama owengeziwe. Ngesikhathi inyanga igcwele kodwa unyezi ungasebukhali kakhulu amandla wonke ase-